၂၀၁၉ မှာလူတိုင်းနီးပါး ထားလာကြမယ့် ဆံပင်ပုံစံ (၅) မျိုး - For her Myanmar
၂၀၁၉ မှာလူတိုင်းနီးပါး ထားလာကြမယ့် ဆံပင်ပုံစံ (၅) မျိုး
ကဲ နှစ်သစ်ကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတော့ နှစ်ဟောင်းက ပရမ်းပတာ၊ ဖရိုဖရဲဆံပင်ကို ထားခဲ့ဖို့အချိန်တန်ပြီလေ။ နှစ်တိုင်း ၁၂ လပိုင်းအကုန်ဆိုတာနဲ့ ပညာရှင်တွေကနှစ်သစ်အတွက် ဖက်ရှင်ပုံစံအသစ်တွေ၊ မိတ်ကပ်ပုံစံနဲ့ တခြားဆံပင်ပုံစံအသစ်တွေကိုလည်း ခန့်မှန်းကြတာဆိုတော့ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊ လူသစ်၊ ပုံစံအသစ်နဲ့ ဖြတ်သန်းချင်တဲ့ယောင်းတို့အတွက် ပညာရှင်တွေခန့်မှန်းထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံအသစ် ၅ မျိုးကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ နှင်းကဖော်ပြပေးသွားမှာပါလို့။
ဆံပင်ကိုလေ ခေါင်းလျှော်ပြီး မစိုမခြောက်အနေအထားမှာ ကျစ်ဆံမြီးကျစ်ပြီး တစ်ညလောက်ထား ဖြေချတဲ့အချိန် ဖြစ်လာတဲ့ ကောက်သားလေးကို လက်ကောက်ဆံပင်အခွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီဆံပင်အခွေလေးက တခြားအကောက်တွေလို အရမ်းကောက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြေပြေလေးနဲ့မို့ ဆံပင်ကောက်တိုင်း ကြုံရတတ်တဲ့ မျက်နှာအိုသွားတတ်တဲ့ ပြဿနာမျိုး မကြုံတော့ဘဲ လူငယ်ဆန်ဆန်လေးပဲ ဖြစ်နေစေမှာမို့ ဒီဆံပင်ပုံစံလေးက ခေတ်စားလာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတာပါ။
ခေါင်းမလျှော်ရသေးတဲ့ဆံပင်ဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားဆံပင်ပုံစံကို မစဉ်းစားနိုင်တော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုနီတေးလ်ကိုပဲ ကောက်ကောက်စည်းသွားတတ်ကြတယ်မလား။ ဒါပေမဲ့ ၂၀၁၉ မှာတော့ ဦးခေါင်းထိပ် အလယ်နားလောက်ထိ မြှင့်ထားတဲ့ ပိုနီတေးလ်က ခေတ်တစ်ခေတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နဖူးကြောရှင်းပြီး မျက်နှာရှည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေနဲ့ အရမ်းသင့်တော်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံမို့ ပွဲတက်ပုံစံနဲ့လည်း အထူးသင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ ဖြည့်စွက်ပြီးပြောထားပါသေးတယ်။
ခါတိုင်းလို နဖူးစည်းထားတဲ့ ဒဲ့အတိ ရှေ့ဆံမြိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲ ခပ်ရှည်ရှည်၊ မထူမပါးနဲ့ ဘေးဘက်ကိုဖြာထွက်သွားတဲ့ လိုက်ကာပုံစံက ၂၀၁၉ မှာ အရမ်းခေတ်စားလာပါလိမ့်မယ်။ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ ပျိုမြစ်တဲ့အသွင်ကိုပဲ ဖြစ်စေတာမို့ နှင်းလည်းဒီဆံမြိတ်လေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်ကို တစ်ချက်လေးပြန်ငဲ့စောင်းပြီး ကြည့်လိုက်ရင်တော့ မီးပူတိုက်ထားသလို ပြားကပ်နေတဲ့ ဆံပင်တွေကို တလှပ်လှပ်နဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု ၂၀၁၉ မှာလည်း ဒီလိုဖြောင့်စင်းနေတဲ့ဆံပင်တွေကို ပြန်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောနေကြပါတယ်။ (အိမ်မှာချောင်ထိုးထားတဲ့ ဆံပင်ဖြောင့်စက်တွေကို ဖုန်ပြန်သုတ်ထားတော့ :P)
၂၀၁၆ လောက်ကတည်းက ဆံပင်ကိုပွဲတက်တဲ့အခါ ခဏပဲကောက်တဲ့အကောက်(Settting လိပ်) တာကိုပဲ တောက်လျှောက်လုပ်လာတာ အခု ၂၀၁၉ မှာတော့ ဆံပင်ပေါ်မှာ ကလစ်၊ ဆံညှပ်၊ ဆံထိုးအပါအဝင် တခြားတွဲဖက်အသုံးအဆောင်တွေကိုလည်း တွဲဖက်ပြီး သုံးလာကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။
ဒီလိုဆံပင်ပုံစံတွေအပြင် ၂၀၁၉ မှာ ခေတ်အစားဆုံးဖြစ်လာမယ့် ဆံပင်အရောင်ကတော့ မီးခိုးရောင်ပါ။ မီးခိုးရောင်ကိုမှ အရောင်နည်းနည်းရင့်ပြီး ပြောင်နေတဲ့အရောင်မျိုးတဲ့။ (ဟယ် အံ့သြစရာကြီး။ ဘယ်လိုတောင် ပြောင်နေတဲ့အရောင်မျိုးလား။) အရင်တုန်းကလို ဆံပင်ကုတ်ဝဲဖောင်းဖောင်းလေးလည်း စာရင်းထဲမရှိတော့ဘူး၊ step ကေလို့ခေါ်တဲ့ အချွန်အတက်ဆံပင်မျိုးလည်း ခေတ်ကုန်ပြီဆိုတော့ မဖြစ်ချေတော့ဘူး၊ အခုပဲ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ပြေးပြီး ကေကိုရွှိုင်းမှရတော့မယ်။ ပြောနေကြာပါတယ် အခုပဲပြေးးးပြီ!!!!
References : instyle, Bazzar
ကဲ နှဈသဈကိုရောကျလာတော့မယျဆိုတော့ နှဈဟောငျးက ပရမျးပတာ၊ ဖရိုဖရဲဆံပငျကို ထားခဲ့ဖို့အခြိနျတနျပွီလေ။ နှဈတိုငျး ၁၂ လပိုငျးအကုနျဆိုတာနဲ့ ပညာရှငျတှကေနှဈသဈအတှကျ ဖကျရှငျပုံစံအသဈတှေ၊ မိတျကပျပုံစံနဲ့ တခွားဆံပငျပုံစံအသဈတှကေိုလညျး ခနျ့မှနျးကွတာဆိုတော့ နှဈသဈမှာ စိတျသဈ၊ လူသဈ၊ ပုံစံအသဈနဲ့ ဖွတျသနျးခငျြတဲ့ယောငျးတို့အတှကျ ပညာရှငျတှခေနျ့မှနျးထားတဲ့ ဆံပငျပုံစံအသဈ ၅ မြိုးကို ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ နှငျးကဖျောပွပေးသှားမှာပါလို့။
ဆံပငျကိုလေ ခေါငျးလြှျောပွီး မစိုမခွောကျအနအေထားမှာ ကဈြဆံမွီးကဈြပွီး တဈညလောကျထား ဖွခေတြဲ့အခြိနျ ဖွဈလာတဲ့ ကောကျသားလေးကို လကျကောကျဆံပငျအခှလေို့ ချေါပါတယျ။ အဲဒီဆံပငျအခှလေေးက တခွားအကောကျတှလေို အရမျးကောကျနတောမြိုးမဟုတျဘဲ ပွပွေလေေးနဲ့မို့ ဆံပငျကောကျတိုငျး ကွုံရတတျတဲ့ မကျြနှာအိုသှားတတျတဲ့ ပွဿနာမြိုး မကွုံတော့ဘဲ လူငယျဆနျဆနျလေးပဲ ဖွဈနစေမှောမို့ ဒီဆံပငျပုံစံလေးက ခတျေစားလာလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးကွတာပါ။
ခေါငျးမလြှျောရသေးတဲ့ဆံပငျဖွဈဖွဈ၊ တခွားဆံပငျပုံစံကို မစဉျးစားနိုငျတော့လို့ပဲဖွဈဖွဈ ပိုနီတေးလျကိုပဲ ကောကျကောကျစညျးသှားတတျကွတယျမလား။ ဒါပမေဲ့ ၂၀၁၉ မှာတော့ ဦးခေါငျးထိပျ အလယျနားလောကျထိ မွှငျ့ထားတဲ့ ပိုနီတေးလျက ခတျေတဈခတျေဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးနကွေပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ နဖူးကွောရှငျးပွီး မကျြနှာရှညျတဲ့ မိနျးကလေးတှနေဲ့ အရမျးသငျ့တျောတဲ့ ဆံပငျပုံစံမို့ ပှဲတကျပုံစံနဲ့လညျး အထူးသငျ့တျောလိမျ့မယျလို့ ဖွညျ့စှကျပွီးပွောထားပါသေးတယျ။
ခါတိုငျးလို နဖူးစညျးထားတဲ့ ဒဲ့အတိ ရှဆေံ့မွိတျမြိုးမဟုတျတော့ဘဲ ခပျရှညျရှညျ၊ မထူမပါးနဲ့ ဘေးဘကျကိုဖွာထှကျသှားတဲ့ လိုကျကာပုံစံက ၂၀၁၉ မှာ အရမျးခတျေစားလာပါလိမျ့မယျ။ အရမျးခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံစံမြိုးမဟုတျဘဲ နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ ပြိုမွဈတဲ့အသှငျကိုပဲ ဖွဈစတောမို့ နှငျးလညျးဒီဆံမွိတျလေးကို အရမျးသဘောကတြယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၅ နှဈလောကျကို တဈခကျြလေးပွနျငဲ့စောငျးပွီး ကွညျ့လိုကျရငျတော့ မီးပူတိုကျထားသလို ပွားကပျနတေဲ့ ဆံပငျတှကေို တလှပျလှပျနဲ့မွငျတှရေ့မှာပါ။ ဒါပမေဲ့ အခု ၂၀၁၉ မှာလညျး ဒီလိုဖွောငျ့စငျးနတေဲ့ဆံပငျတှကေို ပွနျမွငျရလိမျ့မယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောနကွေပါတယျ။ (အိမျမှာခြောငျထိုးထားတဲ့ ဆံပငျဖွောငျ့စကျတှကေို ဖုနျပွနျသုတျထားတော့ :P)
၂၀၁၆ လောကျကတညျးက ဆံပငျကိုပှဲတကျတဲ့အခါ ခဏပဲကောကျတဲ့အကောကျ(Settting လိပျ) တာကိုပဲ တောကျလြှောကျလုပျလာတာ အခု ၂၀၁၉ မှာတော့ ဆံပငျပျေါမှာ ကလဈ၊ ဆံညှပျ၊ ဆံထိုးအပါအဝငျ တခွားတှဲဖကျအသုံးအဆောငျတှကေိုလညျး တှဲဖကျပွီး သုံးလာကွလိမျ့မယျလို့ ထငျကွေးပေးနကွေပါတယျ။
ဒီလိုဆံပငျပုံစံတှအေပွငျ ၂၀၁၉ မှာ ခတျေအစားဆုံးဖွဈလာမယျ့ ဆံပငျအရောငျကတော့ မီးခိုးရောငျပါ။ မီးခိုးရောငျကိုမှ အရောငျနညျးနညျးရငျ့ပွီး ပွောငျနတေဲ့အရောငျမြိုးတဲ့။ (ဟယျ အံ့သွစရာကွီး။ ဘယျလိုတောငျ ပွောငျနတေဲ့အရောငျမြိုးလား။) အရငျတုနျးကလို ဆံပငျကုတျဝဲဖောငျးဖောငျးလေးလညျး စာရငျးထဲမရှိတော့ဘူး၊ step ကလေို့ချေါတဲ့ အခြှနျအတကျဆံပငျမြိုးလညျး ခတျေကုနျပွီဆိုတော့ မဖွဈခတြေော့ဘူး၊ အခုပဲ ဆံပငျညှပျဆိုငျပွေးပွီး ကကေိုရှိုငျးမှရတော့မယျ။ ပွောနကွောပါတယျ အခုပဲပွေးးးပွီ!!!!
Tags: 2019, Guess, hairstyle, new, specialists, trend